ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: ရိုဟင်ဂျာ(ဘင်္ဂါလီ) သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ် ARE NOT MYANMAR NATIONAL
ရိုဟင်ဂျာ(ဘင်္ဂါလီ) သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ် ARE NOT MYANMAR NATIONAL
Rohimjas (Bingali) ARE NOT MYANMAR NATIONAL
ဖတ်လိုက်ရတဲ့. ကွန်းမန့်လေး တစ်ခုပါ .... နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ အမျိုးဘာသာမရွေး မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လုပ်နိုင်ကြမယ့် ကိစ္စလေးပါ ... မျှဝေလိုက်ပါတယ်....
ကိုယ့် ထမင်း ကိုယ်ရှာ စားပီး ဆူဆူ ပူပူ မလုပ်ကြ ပါနဲ့။ ဆူရန် ပူရန် အကြောင်း မရှိ။ လမ်းပေါ်တက်ပီး အစိုးရကို အလုပ်ရှုပ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့။ ရိုဟင်ဂျာ(ဘင်္ဂါလီ) သည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ် - Rohimjas (Bingali) ARE NOT MYANMAR NATIONAL- ဆိုတဲ့ စာကလေးသာ အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း၊ လမ်းတိုင်း လမ်းတိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်း ရပ်ကွက်တိုင်း၊ မြို့နယ်တိုင်း မြို့နယ်တိုင်း ပြည်နယ်တိုင်း ပြည်နယ်တိုင်း၊ ရေးပီး အိမ်ရှေ့ ၀င်းစီးရိုးမှာ ချိတ်ထားကြ။ ဗမာတိုင်း ဗမာတိုင်း၊ မြန်မာတိုင်း မြန်မာတိုင်း အဲဒီလောက်တော့ ကိုယ့် ကိုယ် ကို ချစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကားတွေမှာလဲ ဒီ Sticker လေးတွေ ကပ်ပီး အမျိုးသား စည်းလုံးမှုကို ဖေါ်ထုတ်ပါ။ဒီ Issue နဲ့ ပါတ်သက်ပီး အစိုးရကို ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးကြပါ။ ဒီအချိန်မှာမှ စည်းလုံးမှုကို မဖေါ်ထုတ် မပြသဘူး ဆိုရင် ဗမာတိုင်း ဗမာတိုင်း မြန်မာတိုင်း မြန်မာတိုင်း ရှေ့ရှောက် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း မှာ လူမလေးခွေးမခန့် ဖြစ်လိမ့်မယ်။
နမ်းဟူးကျေးရွာ ပဋိပက္ခမှာ ဒဏ်ရာရတဲ့ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင် သေဆုံး - ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်မြို့နယ် နမ်းဟူးကျေးရွာမှာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့က RCSS နဲ့ ဒေသခံ ပအိုဝ်းရွာသားတွေ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး ဓားနဲ့အခုတ်ခံရတဲ့ RCSS...
We haven't seen you forawhile on Twoo! - Meet new people instantly! Hi Gatot Rahardjo, Millions of members are having fun on Twoo! Log in +*7*7people are waiting for you to answer their mess...